कोरोना महामारीबीच प्रहरीका हाकिमलाई प्रचार मोह : भिडभाड जम्मा गरेर सरकारकै खिल्ली ! | Diyopost
काठमाडौं, २७ साउन । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारी जारी रहँदा सरकारले भिडभाड नगर्न र २५ जना भन्दा बढीलाई भेला समेत नहुन भनिरहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामाका लागि प्रहरी र स्वास्थ्य कर्मीको कमाण्डमा देशले एउटा लडाईं लडिरहेको छ ।
सर्वसाधरणलाई भेला तथा भोजभतेरमा रोक लगाउन फ्रन्टलाइन खटिने प्रहरीकै केही हाकिमले भने कोरोना महामारीबीच सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो प्रचारकालागि भिडभाड जम्मा गरेर अभियुक्त सार्वजनिक गरेका छन् ।
राजधानीको गोंगबुमा भएको रहस्यमयी हत्याकाण्डका अभियुक्त कल्पना मुडभरीलाई सार्वजनिक गर्न काठमाडौं प्रहरी र महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महासाखाले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । मंगलबार विहान १० : ३० मा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा संयुक्त पत्रकारसम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त घटनाबारे पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको विषयमा पत्रकारलाई आन्दाज नहुने कुरा भएन । किन भने कल्पनाले हत्या गरेको स्विकारोक्तीको बयान विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइसकेको थियो ।
प्रहरीले ४८ घण्टासम्म गरेको अपरेशनको बयान सुनाउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोरोनाको कुनै प्रवाहा नगरी ठूलै भिडभाड देखियो । प्रहरी नेतृत्व विसम परिस्थितिको बीचमा यसरी भिडभाड गरेर पत्रकार सम्मेलनको नाममा प्रचारबाजी किन गर्नु परेको होला ? यस्ता प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा उठ्न थालेका छन् ।
के प्रहरीले अन्य अभियुक्तलाई जस्तै डिजिटल इमेल वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर कल्पनालाई पनि सार्वजनिक गर्न सक्ने थिएन ? तर, काठमाडौं प्रहरीका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवाली र अपराध महासाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले आफ्नो प्रचार गर्नकै लागि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
‘क्यामरा बोक्ने र प्रेस कार्ड भिर्ने देखेपछि कोरोना पनि तर्सेर भाग्छ रे हो, ?’ सामाजिक सञ्जालमा एक पत्रकार लेख्छन् ।
यस्तोमा प्रहरीको मात्रै होइन पत्रकारको समेत लापरबाहीको पराकाष्ठ भएको पत्रकार देवकी विष्ट बताउँछिन् ।
‘सबैभन्दा पहिले यो तस्विर खिच्ने व्यक्तीलाई धन्यवाद,’ तस्विर सार्वजनिक गर्दै विष्ट लेख्छिन्,‘सबैलाई मिडियामा आउन हतारो हुन्छ अनि कोरोना फैलिए पछि मिडियामा लुकाउने चटारो हुन्छ । पत्रकार र प्रहरी लापरवाहीको पराकाष्ठ ।’
कुनै पनि घटनामा अभियुक्त पक्राउ गरेपछि प्रहरी नेतृत्व आफ्नो प्रचार गर्न लिप्त बनेका घटना यसअघि पनि सार्वजनिक भएका हुन् ।
८८ किलो सुन तस्करीका अभियुक्त पक्राउ गरेपछि तत्कालिन प्रहरी नेतृत्वबीच पत्रकार सम्मेलन गर्ने स्थानको विषयमा ठूलै लफडा भएको थियो । तर, यतिबेला भने मुलुक नै एउटा महामारीसँग लडिरहेको बेला प्रहरीको हाकिमहरुको प्रचार मोहलाई रहस्यमयी रुपमा हेरिएको छ ।